Waaliga Gobalka Baglaan Oo Shihiiday. – Calamada.com
Waaliga Gobalka Baglaan Oo Shihiiday.
calamada April 19, 2017 1 min read
Wararka ka imaanaya dalka Afghanistan ayaa sheegaya in habeenkii xalay ciidamada dowlada Nasaarada Mareykanka oo ay wehliyaan maleeshiyaat ka tirsan maamulka daba dhilifka Kaabul weerar qorsheysan ay ku qaadeen qeybo ka mid ah gobalka Baglan.
Weerarka ayaa isugu jiray mid ay ka qeyb qaadanayeen ciidamo American oo Lug ah iyo diyaaradaha dagaalka Nasaarada Mareykanka’waxeyna iska caabin xoogan kala kulmeen ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan.
Warar hordhac ah oo laga helayo dagaalkaasi ayaa sheegaya in halkaasi uu ku shihiiday Waaligii Wilaayada Islamiga Baglan ee Imaarada Islaamiga Afghanistan oo lagu magacaabi jiray Mawlawi Lal Muhammad ”Muhammadi” waxaa Waaliga la shahiiday afar Walaal oo ka mid ahaa ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga.
Ciidamada Nasaarada Mareykanka iyo kuwa maamulka daba dhilifka fadhigiisu yahay magaalada Kaabul ayaa iyaguna dhankooda la xaqiijiyay in khasaara culus oo baqti iyo dhaawac ah ay kala kulmeen dagaalkaasi.
Dhanka kale Todobo askari American ah ayaa lagu dilay Afar kalane waa lagu dhaawacay qaraxyo kolanyo American ah lagula beegsaday qeybo ka mid ah gobalada Qunduuz iyo Nangahar ee dalka Afghanistan.
Previous: Dhageyso Askar Ka Tirsan Shisheeyaha Oo Dhimasho Iyo Dhaawac Ku Noqday Sh/hoose.
Next: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo 22-07-1438 Hijri.